စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Cloud- MobileConnect သို့ SMS အဆက်အသွယ်များကို တင်သွင်းရန် Automation Studio တွင် အလိုအလျောက်စနစ်တစ်ခု ဖန်တီးနည်း Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ရှုပ်ထွေးသောအသွင်ပြောင်းမှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများပါရှိသော တစ်ဒါဇင်ခန့် ပေါင်းစပ်မှုများပါရှိသော သုံးစွဲသူတစ်ဦးအတွက် Salesforce Marketing Cloud ကို မကြာသေးမီက အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ အမြစ်မှာ တစ်မျိုး Shopify Plus အား အခြေခံနှင့်အတူ စာရင်းသွင်းမှုများကို ပြန်ဖြည့်ပါ။စာရင်းသွင်းမှုအခြေခံ e-commerce ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် ရေပန်းစားပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဖြေရှင်းချက်။
ကုမ္ပဏီတွင် သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ စာရင်းသွင်းမှုများကို စာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှတစ်ဆင့် ချိန်ညှိနိုင်သည့် ဆန်းသစ်သော မိုဘိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခု ရှိသည်။စာတို) ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းအဆက်အသွယ်များကို MobileConnect သို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် လိုအပ်သည်။ MobileConnect သို့ မိုဘိုင်းအဆက်အသွယ်များ တင်သွင်းရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းမှာ-
တင်သွင်းမှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဖန်တီးပါ။ တည်ဆောက်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။.
အလိုအလျောက်စနစ်တစ်ခု ဖန်တီးပါ။ အလိုအလျောက်စနစ်စတူဒီယို.
ထည့်ပါ တင်သွင်းလှုပ်ရှားမှု အလိုအလျောက်စနစ်သို့။
သွင်းကုန် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သောအခါ၊ ကို ရွေးချယ်ပါ။ တင်သွင်းခြင်းအဓိပ္ပါယ် သင်ဖန်တီးခဲ့သည်။
အချိန်ဇယားနှင့် automation ကိုဖွင့်ပါ။.
ဒါဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့်5အဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလိုပါပဲ၊ ဟုတ်ပါသလား။ အမှန်က အဲဒါက ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက် အဲဒါကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဒီမှာ မျှဝေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
Automation Studio ကိုအသုံးပြု၍ MobileConnect သို့ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Cloud မိုဘိုင်းအဆက်အသွယ်များကို အလိုအလျောက်တင်သွင်းရန် အသေးစိတ်အဆင့်များ
ပထမအဆင့်မှာ Contact Builder တွင် သင်၏တင်သွင်းမှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါသည်။
တင်သွင်းမှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဖန်တီးပါ။ တည်ဆောက်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ဖန်တီး Contact Builder > Imports တွင် ခလုတ်။
ကို Select လုပ်ပါ စာရင်း မင်္ဂလာပါ ဦးတည်ရာ သင်လုပ်ဆောင်လိုသော မြှင့်တင်မှုအမျိုးအစား။
ကို Select လုပ်ပါ သွင်းကုန်အရင်းအမြစ်. ယာယီကနေ တင်သွင်းဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာတိုးချဲ့မှု ၎င်းသည် data နှင့်အတူကြိုတင်တင်ထားသည်။
အပေါ်နာရီ List ကို ရွေးပါ။ နှင့် သင်၏စာရင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ (ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်၊ အဆက်အသွယ်အားလုံး - မိုဘိုင်း)။
ဤအဆက်အသွယ်များအားလုံးတွင် ရွေးချယ်ဝင်ရောက်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို MobileConnect သို့ ပြောင်းရွှေ့နေသောကြောင့် သင်သဘောတူရပါမည်။ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မူဝါဒကို ရွေးချယ်ပါ။.
သင်၏တင်သွင်းမှုစာရင်းကော်လံများကိုမြေပုံပါ (ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသည်။ ဒေတာတိုးချဲ့မှု ContactKey နှင့် တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သည်)။
သင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အမည်ပေးပြီး ရွေးချယ်ပါ။ SMS ကုဒ် နှင့် SMS သော့ချက်စာလုံး.
wizard ကိုအတည်ပြုပြီးနှိပ်ပါ။ အပြီးသတ် သင့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကို သိမ်းဆည်းရန်။ ရလဒ်များနှင့်အတူ တင်သွင်းမှုကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါတိုင်း သင့်အား အသိပေးနိုင်ရန် အသိပေးချက်များအတွက် သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းရန် သေချာပါစေ။
သင်၏ တင်သွင်းမှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ယခု သိမ်းဆည်းထားပြီး ၎င်းကို သင်ဖန်တီးမည့် သင်၏ အလိုအလျောက်စနစ်တွင် ကိုးကားနိုင်ပါသည်။ အလိုအလျောက်စနစ်စတူဒီယို.
အလိုအလျောက်စနစ်ဖန်တီးရန် အဆင့်များ အလိုအလျောက်စနစ်စတူဒီယို သိပ်မရှင်းပါဘူး။ မသုံးပါနှင့် ဖိုင်တင်သွင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်။ ရှာပါ SMS လုပ်ဆောင်ချက် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်နေရာတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ SMS ဆက်သွယ်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်ကို တင်သွင်းပါ။.
ထည့်ပါ တင်သွင်းလှုပ်ရှားမှု အထက်အဆင့် 8 တွင် သင်ဖန်တီးထားသော တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အလိုအလျောက်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ။ ချဲ့ထွင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ SMS ဖိုင်တွဲ မင်းဘယ်မှာတွေ့မလဲ။ တင်သွင်းခြင်းအဓိပ္ပါယ်.
အချိန်ဇယားနှင့် automation ကိုဖွင့်ပါ။. သင်၏အလိုအလျောက်စနစ်လည်ပတ်သောအခါတွင်၊ သင့်မိုဘိုင်းအဆက်အသွယ်များကို တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပြီး အဆင့် 8 ရှိ အီးမေးလ်လိပ်စာတွင် သင့်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့် Highbridge. ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသော မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်းများမှ Mobile Cloud သို့ ကျယ်ပြန့်စွာ အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။
Tags: အလိုအလျောက်စနစ်စတူဒီယိုတည်ဆောက်သူကို ဆက်သွယ်ပါ။ဆက်သွယ်ရန်သော့တင်သွင်းမှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဖန်တီးပါ။ဒေတာတိုးချဲ့မှုလယ်ကွင်းမြေပုံတင်သွင်းခြင်းအဓိပ္ပါယ်တင်သွင်းစာရင်းမိုဘိုင်းစာရင်းတင်သွင်းပါ။မိုဘိုင်းစာရင်းသွင်းသူများကို တင်သွင်းပါ။sms အဆက်အသွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တင်သွင်းပါ။စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုcloud်းတိမ်ကိုစီးမိုဘိုင်းအဆက်အသွယ်များမိုဘိုင်းစတူဒီယိုမိုဘိုင်းချိတ်ဆက်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မူဝါဒကို ရွေးချယ်ပါ။ဓာတ်အားစာရင်းသွင်းမှုများကို အားပြန်သွင်းပါ။ရောင်းသူsfmcShopify Plus အားစာတိုsms ကုဒ်sms သော့ချက်စာလုံးဦးတည်ရာပန်းတိုင်